Beautiful manicure esikoleni: umqondo
Njalo ntombazane encane ufuna ukuqonda izimfihlo ubuhle nento njengabesifazane ngokushesha ngangokunokwenzeka. I ukulinga ukubukeka kwabo evumela intsha uthole isitayela owehlukile nendlela ngokuvumelana. Ngeshwa, abantu abadala abazona njalo ukwazi ukuhlola indlela yokudala ekuxazululeni lezi zinkinga futhi abalela bantfu usemncane kakhulu ukugqama grey mass. Kulesi sihloko sizoxoxa ngendlela ukwenza manicure esikoleni. Uzofunda indlela ukugcizelela ubuntu babo futhi ngesikhathi esifanayo singeqeli ngale imithetho lesikhungo.
Yini intombazane kudingeka yazi ngezinguquko ekunakekeleni izandla zakho
Funda indlela ukuqapha isimo isikhumba nezinzipho, futhi ungakhohlwa mayelana nezinqubo inhlanzeko.
Thola iqoqo siqu manicure.
Ungasebenzisi izimali for ukunakekelwa izingalo equkethe acid noma izidakamizwa ezinamandla.
Beautiful manicure esikoleni kungenziwa ekhaya. Kodwa uma awunalwazi olutheni kule ndaba, bese nifuna iseluleko esiphezulu noma vakashela i-salon ubuhle.
Khumbula, ngeke kukusize ngalutho-ke ukwenza manicure.
Ukukhetha manicure esikoleni, ukuyeka ezahlukeneyo esikhanya kakhulu futhi okubangela.
Yenza manicure elula esikoleni, ungenawo ukuheha spotlight yedwa. Kodwa abantu ezungeze uzophawula ukuthi une izandla amahle, elungile ifomu izinzipho kanye ukubukeka uzilungise. Othisha bayokwazisa isizotha besitshudeni futhi awukwazi benihlambalaza yakhe vulgarity noma ukwephulwa yokugqoka esikoleni.
Indlela ukusebenzisa lacquer obala izinzipho? Inqubo ilula: siphathe izinzipho zakho ezipikili ifayela, ukusebenzisa isisekelo upende bese ulinda kuze kube seyomile. Ngemva kwemizuzu embalwa, ungafaka isicelo umbala isizinda, futhi uma uthanda, bese iphele-fixer. Ngemva kwalokho, zama athule ingamthinti lutho isikhashana - uma uthinta enamathela ke bonke babe ukuqala kabusha.
Manicure e iyashintsha iyaphupha ibe nemibala
Yini manicure kwenziwe esikoleni, uma imithetho lesikhungo kukhona ngokwanele elawula? Wena njalo ukusiza manicure e iyashintsha iyaphupha ibe imibala. Epholile umthunzi nail kuyinto inkomba zizwakale kahle, ubuhle kanye nolwazi yemfashini. Kulo nyaka, imibala iyashintsha iyaphupha ibe yiwona mkhuba isizini, ngakho ukhululeke ukhethe beige lacquer, peach kanye grey. Nakani shades esithambile pink futhi fuchsia. Njengoba sebezinikele kule onjalo manicure lula esikoleni, ngeke baphelelwe ukunakwa. Kodwa ungakhohlwa ukuthi ngempumelelo lezi imibala bheka izinzipho nje manicured nge shape bushelelezi futhi mahhala burrs.
Classic nail imiklamo zizohlala imfashini, kuyinto ephelele abesifazane zanoma iyiphi iminyaka. Yenza lokhu manicure enemisebenzi esikoleni futhi uqiniseke ukuthi kuyafaneleka noma ngabe isiphi isikhathi.
Khumbula ukuthi le khava kukhetha kunalokho xaka. Futhi kufanele sizame ukufunda ukuze benze kahle. Okokuqala, iya esitolo ubuhle futhi ukusebenzisa onguchwepheshe. Uzokwazi ukubona ukuthi inkosi, yini ukumbuza imibuzo yakho. Khona-ke ukuthenga iqoqo manicure French futhi, uma kunokwenzeka, musa skimp kuso. Quality izinto kuzosiza ukuthuthukisa ubuhle izinzipho zakho futhi ukwakha isithombe esiphelele.
Ukudala French manicure nail sula sivame ezintathu: pink, white futhi esobala. Nokho, ungakwazi beveza version ayo bese ukhetha eminye imibala ezilungele xaxa izingubo zakho zansuku zonke noma ngemifaniswano yesikole.
"Izintatheli zamaphephandaba nazo" manicure
Ungazama ukwenza manicure esikoleni sezingane kakhulu sika. Kukhona amasu amaningana iphephandaba design, kodwa sihlale ku ezimbili kuphela.
Wasike tikwele letincane iphepha eziyishumi nombhalo. Phawula ukuthi kule ndaba nail ngamunye uyobheka ahlukene. Uma ufuna iphethini iyaphindwa ke udinga izicucu eziyishumi alinganayo, futhi amaphephandaba ngaleyo ndlela eziyishumi ezifanayo. isikwele ngasinye kufanele kancane kuka kobuso nail ke ukwenza kube lula ukususa. Ngakho sifaka ukuvenisha esobala futhi ungalindi kuze seyomile. Ngokushesha smear ephepheni nail remover sula, futhi ngazo ukuba nail. A ngomzuzu olandelayo, asuse ephepheni bente okuholela sibalo fixer ungqimba.
Khetha eziyisisekelo enamathela umbala - grey, beige noma amhlophe. Yenza manicure bese ulinda upende some ngokuphelele. Lungisa iphepha enze aphume ke izingcezu square eziyishumi. Wehlisa nail on the imizuzwana emihlanu utshwala, futhi unamathisele ephepheni ngombhalo. A ngomzuzu olandelayo, ungasusa iphepha, sisebenzise fixative ukuze umdwebo esiphelele.
Ukwenza manicure esikoleni, khetha noma yisiphi isihloko: amanothi, tinombolo, izincwadi Russian noma isiLatini. Othisha enjalo ungayi aphume izifundo esikoleni, uzokubona okwakhe yakho.
What do manicure eyeve eshumini nambili intombazane esikoleni, uma kumelwe kube njalo uyazi fashion Amathrendi zamuva? Yiqiniso, manicure nge isithombe! Ingalo wena nge lokuvungula, ibhulashi kanye nesethi lacquers ezinemibala. Ngosizo ngala mathuluzi, ungakwazi ukuhlobisa izinzipho zakho uyithukulule izimbali, amacembe noma iphethini weJiyomethri. Kodwa abayi wathumba, ngoba ubunengi imigexo akukuniki umusa othisha.
Ukhethe kahle uma ufuna ukwenza manicure amahle esikoleni. Ungaqiniseki amakhono abo, kodwa ufuna ivelele phakathi kontanga? Kahle ngendlela elula yokudala izibalo kwendle. Ukuze wenze lokhu uzodinga lamathuluzi lapho ufuna ukuhumusha ku izinzipho zakho noma yikuphi iphethini:
Scraper ukususa sula ngokweqile.
A manicure, sisebenzise isizinda umbala izipikili bese ulinda upende some ngokuphelele. Khona-ke thatha drive, khetha iphathini oyifunayo alisibekele emthunzini emnandi. Khumbula ukuthi kungcono ukukhetha umbala okungafani, ngoba bayokudla bheka esithé ukuphakama. Nge bushelelezi ukususa lacquer ngokweqile futhi babiza iphethini isitembu emizuzwaneni embalwa. Khona-ke ujike ngokucophelela isithombe phezu plate nail nokuvumela uDries lacquer. Cover nail nge ukuvenisha futhi ujabulele ukunakwa yabanye.
Owathi ukuthi ukwenza ukuzimonyonga intsha esikoleni, akufanele libonise ubuntu bakho futhi enamancoko? Konke kunesikhathi nendawo, kodwa isikhungo ngokuvamile uchithe amaholidi kanye imisebenzi yokuzilibazisa ngezinga elingakanani. Njengomthetho, kulezi zinsuku othisha angadingi ezigcemeni zabo ukuhambisana ingubo imithetho eqinile, futhi umkhathi ngalezo zinsuku, ekubeni khulula futhi kulula. Sizokwenza ukukunikeza imibono ambalwa ukudala funny izithombe ukuthi ungakwazi kalula wenze ngokwakho.
izinzipho Hlanza nge ifayela nail ukusebenzisa isisekelo. Njengoba senza kanjalo, siyobe usebenzisa imibala egqamile, lento kufanele kwenziwe ngempela. Kungenjalo wena engozini ophuzi tint nail ipuleti ngemva kokususwa iphethini. Khona-ke beyomboza nge lacquer obomvu bese ulinda kuze kube seyomile. Thatha ibhulashi mncane futhi ukupenda oluhlaza amajikijolo amacembe. Uma ufuna ukuthola umfanekiso ahlanzekile, isifanekiso zangaphambi Yenziwe ngephepha futhi ulisebenzise. It uhlala kuphela ukudweba okusanhlamvu ezincane usebenzisa lacquer emnyama noma emhlophe. Futhi isithombe yakho isilungile.
Day Bonke Osanta ungakwazi ukukhokhela have some fun futhi wenze original manicure esikoleni. Isihloko isithombe kufanele kube mnandi futhi kancane scary. Ngokwesibonelo, ungakwazi ukuhlobisa izinzipho zakho nge amathanga elikhanyayo orange, izicabucabu omnyama noma amathambo smiling. Ngo umkhosi ekwindla kuyoba efanele pirate indaba ephathwayo, candy izithelo Motifs, ubuso heroes ikhathuni ozithandayo noma funny izithonjana. Indlela yokwenza umdwebo:
Cover nail esiyingini umunwe ngopende omhlophe, futhi ngakolunye, ukusebenzisa umbala owolintshi
Lapho isisekelo esomile, thatha ibhulashi mncane futhi ukupenda on isizinda elikhanyayo black Ubulembu.
Beka isicabucabu kwi background elimhlophe.
Cover isithombe nge ukuvenisha okusobala.
Ngemva kokufunda lesi sihloko, ungakwazi ukuqinisekisa ukuthi zikhona amaningi imibono manicure. Nge izithombe, ungabonisa abanye umuzwa wakho isitayela, ejabule futhi abathanda ukuphila. Ukudala isithombe esisha, unikeza injabulo futhi omuhle imizwa wona kodwa futhi nokusindisa abantu abakuzungezile.
Zama ukuqonda yonke imithetho ngokudala manicure kanye khululeka umfanekiso waso. Uyosikhipha nini ukwazi ukuba nemali eyanele yokuthengela liqalise imibono ngokugqamile, uma kungekhona manje? Funda indlela ukuqapha ukubukeka kwabo esemncane nasesikhathini esizayo uzokwazi ukuba kalula art charm nesifazane nobuhle. Wasebenzise kahle amathuba ezingxoxo imibono yethu, imibono raduyte ezizungezile izandla manicured futhi okwakhe nsuku zonke.
Ezinye izincomo mayelana nendlela ukupenda izinzipho zakho ngemibala ehlukene